musha Asia Politicians Kim Jong Un Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Kim Jong Un Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yeUdiki Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Wife, Vana, Mota, Net Kukosha, Mararamiro uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu chemutungamiri weNorth Korea. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaKim Jong Un's Bio.
Hupenyu uye Kukwira kwaKim Jong-un.
Ehe, isu tese tinoziva kuti akatsiva baba vake mushakabvu, Kim Jong-il semutungamiri mukuru weNorth Korea. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kim Jong-un's biography, inoyevedza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kim Jong-un Nyaya yeUcheche Nyaya:
Akagara achifunga nezvechiuto kubva paudiki.
Mubudiriro Mukuru, Kim Jong-un akazvarwa pazuva re8 raJanuary 1984 muPyongyang Maternity Hospital, North Korea. Iye aive wechipiri wevana vatatu vakaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vanofa, Ko Yong-hui (muimbi weopera uye mutambi), uye baba vanopera, Kim Jong-il (aimbova mutungamiriri weNorth Korea mukuru). Pazasi pevabereki vake vanononoka.
Amai vaKim Jong-un nababa. Ona kuti akafanana sei nababa vake.
Kim akakurira pamwe nemukoma wake mukuru (Kim Jong-chul) uye hanzvadzi (Kim Yo-jong), vese vaibva kuvabereki vamwe chete. Kukura, vese hama (Kim Jong-chul naKim Jong-un) vaive nehukama hwakanyanya kuEurope izvo zvakakonzera sarudzo yemubereki wavo yedzidzo yavo.
Kim Jong-un Dzidzo uye Basa Rinovaka:
Kim Jong-un uye mukoma wake mukuru, Kim Jong-chul akaenda kuchikoro che boarding muSwitzerland pedyo neBern. Mishumo yekutanga yakati yaipinda chikoro chega chega cheChirungu-mutauro International Chikoro kuGümligen pasi pezita "Chol-Pak" or "Pak-chol" kubva pagore ra1993 kusvika 1998.
Ona kushingairira kwake nezvidzidzo zvake.
Kuchikoro, Kim akarondedzerwa semunhu ainyara asi akanaka mudzidzi ainetseka nevasikana, asina hanya nenyaya dzezvematongerwo enyika ASI aigara zvakanaka nevaaidzidza navo. Kare kumashure, akachengetedzwa neMubatsiri ari mudzidzi akura.
Kim Jong-un Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Zvakare pamazuva ake ekuchikoro, Kim Jong-un akarondedzerwa semudzidzi akabatanidzwa uye aida chinzvimbo aida kuona vadzidzi vachitamba basketball. Kim aive nehukasha neAmerican National Basketball Association panguva ye1900s. Akanyura mukutarisa iyo NBA, achitora Chicago Bulls sechikwata chake chaanofarira, uye Dennis Rodman kwete Michael Jordan segamba rake.
Zvisingadaviriki !! Akasarudza Dennis Rodman pamusoro paMichael Jordan.
Sezvo nguva yakaenderera, Kim Jong-un's basketball kupindwa muropa kwakave nemhedzisiro yakaipa pamamaki ake. Kuyera kwake kuenda kuchikoro kwaive pane imwe nguva kunonzi kuve murombo nekuda kwekuve nekufarira kwakanyanya mukutarisa kudzokorodza uye kwakasimudzira gamba rake rebhasikiti, Dennis Rodman. Nekudaro, shanduko munzira yemutungamiri wenguva yemberi yakaziviswa nababa vake yakaita kuti Kim Jong-un adzokere kuNorth Korea kwaakaona chitsauko chitsva kuhupenyu hwake neramangwana.
Kim Jong-un Mugwagwa weFame Nhau:
Aive mutungamiri akazvarwa. Ona kuti kunaka kwazvo kukwazisa kwake kwaive sei.
Kim Jong-un akafarirwa nababa vake pamusoro pemukoma wake mukoma, Kim Jong-chul nezve iye aizova mutungamiri wenguva yemberi weNorth Korea. Chikonzero chekutanga chakazvarwa kunze kwekuti Kim Jong-un airatidza zviratidzo zvekuomarara achiri mudiki. Sezvinoratidzwa pazasi, salute yake semwana mudiki yaive SHARP. Chikonzero chechipiri chinoratidza chokwadi chekuti mukuru wake mukoma Kim Jong-chul aive nehunhu hwechikadzi maari hwairatidza kushomeka kwehutungamiriri nehutungamiriri sezvinoonekwa mumufananidzo pazasi.
Kim Jong-un mukoma mukuru, Kim Jong-Chol.
Kim Jong-un Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Pasina mubvunzo, Kim Jong-un semwana aive “Zvakafanana nababa vake”. Zvakare, baba vake, Kim Jong-il vanonzi vakatora kufarira kuna Kim Jong-un, vachicherekedza kuti akaona hukasha hwakafanana naiye mumwanakomana wake mudiki. Izvi zvakagadzira mararamiro matsva aKim Jong-un anoreva iye achigara aine hunhu uye asingatombonyemwerera semufananidzo uri pazasi.
Mukurumbira wake wakauya nemutengo. Aifanira kutaridzika kuoma, saka, aisanyanya kunyemwerera.
Sezvo paakakura, Kim Jong-un akatanga hukama hwepedyo nababa vake zvisina kufanana nemukuru wake mukadzi wechikadzi, Kim Jong-chul, uye kunyangwe mukuru wake mukoma-mukoma Kim Jong-nam vanobva kune vamwe amai. Ukama hwavo hweababa-mwanakomana hunoonekwa mumufananidzo uri pazasi.
Kim Jong-un anotarisa zvese zvakakomba padivi pababa vake.
Nei mukoma wake Mukuru Akaramba Chigaro:
Kim Jong-un mukuru-mukoma-mukoma, mukoma Kim Jong-nam (Akaurayiwa panhandare yendege yeMalsian muna 2017), akambove aifarirwa kuti abudirire, asi zvinonzi haana kuzofarirwa nababa vavo mugore ra2001. Kupunzika kwakauya apo akabatwa achiedza kupinda muJapan nepasipoti yekunyepedzera kushanyira Tokyo Disneyland. Izvi zvakauya nenyaya dzemutemo uye zvakaunza nyadzi kumhuri yake, nekudaro sarudzo kubva kuna baba vake.
Kutora pasipoti yake kwakawana mhedzisiro yakanyanya paari (Kim Jong-nam) kupfuura zvaakanga afungira.
Kim Jong-un nzira yeChigaro cheushe:
Kim Jong-il akatanga kugadzirira mwanakomana wake waaida, Kim Jong-un kuti atore nzvimbo yehutungamiriri mu2010, nokudaro achimuita kuti apinde Kim Il-sung Military University (yakatumidzwa zita rasekuru vake) muguta guru rePyongyang pakati pe2000s. Pakufa kwababa vake muna Zvita 2011, Kim Jong-un anofungidzira simba.
Mukana wekusunungura hutungamiri hwake hwakazviratidzira sezvaaitora simba.
Iye aive achitendwa kuve anga ave mumakore ake makumi maviri panguva iyoyo. Apa ndipo paakatanga kuzivikanwa munyika. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Kim Jong-un Hukama Hupenyu- Musikana, Wife, uye Vana
Kuseri kwemurume wese mukuru, pane mukadzi anoyevedza wekutanga. Ri Sol-ju kana Lee Seol-ju akafananidzirwa pazasi ndiye mudzimai weNorth Korea mutungamiri Kim Jong-un.
Wona kunaka kwakanaka kutaridzika pamwe. Iye akaberekwa akazvarwa anonyemwerera zvikuru kana akagara padivi pemukadzi wake.
Zvishoma zvinozivikanwa nezvake kubva kunzvimbo dzepamutemo dzekuNorth Korea asi masosi ekunze akafungidzira zvakawanda nezve kwake kumashure. Sekureva kwemumwe muongorori weSouth Korea, Kim Jong-il (baba vaKim Jong-un vakanonoka) akange akaronga muchato wavo mushure mekurohwa nesitiroko mu2008. Shiri mbiri dzerudo dzakaroora mu2009.
Akasungira banga nemukadzi wake apo airwara. Nyatsotarisa, anogona kuona zviratidzo zveurwere hwake?
Zvisinei, Pana 25 July 2012, North Korean state media yakazivisa kwekutanga apo Kim Jong-un akaroora Ri Sol-ju.
Vana vaKim Jong-un:
South Korea National Intelligence Service yakaratidza kuti vaviri vacho vanotenda kuva nevana vatatu, kunyange izvi zvisingazikamwi nechokwadi.
Kunze kwekusava nechokwadi, iye anoda vana vake. Iye akapfeka ziso rakanaka kumeso kwake nguva dzose paanenge aine vana vake.
Dennis Rodman, mutambi webasketball uyo anomboshanyira mhuri iyi, akati mwana wechipiri musikana anonzi Ju-ae. Nekudaro, zvinyorwa zveSouth Korea zvakafungidzira kuti vanogona kuve nevana vakawanda. Ri Sol-ju akaonekwa kakawanda paruzhinji nemurume wake (Kim Jong-un).
Iye mutungamiri wechidiki, achifamba nemukadzi wake wekutanga.
Muna Kubvumbi 2018, zita raRi Sol-ju rakakwidziridzwa muhurumende midhiya kusvika “Mukadzi anoremekedzwa” iyo yaifungidzirwa serukudzo rwakakosha, uye kekutanga zita richishandiswa kubvira 1974.
Kim Jong-un ill Fate neMusikana wake wemu Ex:
Anoisa pamberi mabasa ake uye hunhu kupfuura zvese. Hazvishamise, haana kuzeza kuuraya musikana wake.
Kim Jong-un aimbova musikana, Hondo Rwiyo-Wol aive pakati pevamwe gumi nevaviri vanozivikanwa vekuKorea vanoita zvemitambo vakaurayiwa nemapurisa muna Kurume 2013 maererano nemishumo yeSouth Korea.
Hyon Song-Wol, muimbi uye nerunyerekupe rwekuti aimbove anoda weiyo North Korea mutungamiri Kim Jong-un. Mishumo yakaratidza kuti akasungwa musi waNyamavhuvhu 17 nekuda kwekutyora mitemo yemumba nezvekuita zvevakomana nevasikana. Hyon Song-Wol akapfurwa nepfuti mazuva matatu gare gare nemhuri dzake dzepedyo vakamanikidzwa kuti vatarise uye ndokuzoendeswa kumisasa yevasungwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti bhendi raHyon raitungamira tambo yeanoda nyika muNorth Korea, kusanganisira “Tsoka Dzemauto,” "Ndinoda Pyongyang," “Iye Murwi Akabuda” uye “Tiri Mauto eBato”. Kuzivikanwa kwake kunonzi kwakawedzera muna 2005 nerwiyo "Akanaka Kwakaita Akaita Bhiza."
Kim Jong-un Chokwadi cheMunhu:
Kim Jong-un chidhakwa chikuru uye haatombo bvuma kukundwa. Iye ane rudo Johnnie Walker whisky.
Iko kutarisa kweiyo yakanakisa doro reKim Jong-un.
Jong-un kusvuta Yves Saint Laurent fodya. Mutungamiri mukuru akamboshandisa £ 70,000 pamakisi nemidzanga, uye £ 88,000 pamichina yekutsvaira fodya yakakura mumusha iyo yaanozvikudza nayo.
Iyewo anoda fodya. Wow! unogona kufungidzira kufara kwaakaita nekubata imwe chete.
Kim Jong-un anofarira kuputa fodya nguva yega yega yaanoda kuona mabasa ake enyukireya achiita. Sezvinoonekwa mumufananidzo uri pazasi, Kim akati bhomba rake re hydrogen rinogona kurova chero kupi muUnited States panguva Trump kutonga. Kutenda kwaari, nyika yake kuve neyakanyanya yepamusoro yevanhurume vanoputa munyika.
Muna 2009, nhau dzakaratidza kuti Kim Jong-un aiva nechirwere cheshuga uye akatambura nehuwandu hwehutano. Kim Jong-un haana kuonekwa musangano kwemavhiki masere munaSeptember naOctober 2014. Hurumende nyanzvi yakazivisa kuti akanga achitambura kubva kune "Kusagadzikana muviri". Pakupedzisira akanga aonekwa achidzimbura. Paakazocheka, akanga achishandisa tsvimbo yekufamba.
MunaGunyana 2015, hurumende yeSouth Korea yakataura kuti Kim airatidzika kunge akawana 30 kg mumafuta emuviri mumakore mashanu apfuura, achisvika pahuremu hunofungidzirwa hwemuviri hwe130 kg (290 lb).
Mufananidzo wake unoratidza kuti zvechokwadi akawana huremu hwakawandisa pamusoro pemakore.
Kim Jong-un yakaitwa a "daejang ” iyo ndiyo yakaenzana nenyeredzi ina Kazhinji muUnited States. Nyika yake vanhu havanyatso kumudana zita. Nguva yekutanga zvakaitika yaive musi wa 27 Gunyana 2010 uko vekuNorth Korea vezvenhau vakataura nezvake zita uye kunyangwe iye akange asina ruzivo rwechiuto.
Kim Jong-un akaita zvitatu zvekuenda kune dzimwe nyika kubva paakafunga kuti ave Supreme Leader weNorth Korea. Kim akaenda kuChina kaviri, uye South Korea kamwechete (sapanguva yekunyora).
Kim Jong-un Hupenyu Hwemhuri Hupenyu Chokwadi:
Nezve baba vaKim Jong-un:
Baba vake Kim vakaberekerwa muVyatskoye, Russia, panguva ichiri chikamu cheSoviet Union. Nekutanga ma1980s, Kim akange asimuka kuti ave mugari wenhaka anoonekwa sehutungamiriri hweNorth Korea uye akatora nzvimbo dzakakosha mubato uye nhengo dzeuto. Iye anozivikanwa kunge akatsiva baba vake, Kim Il-sung (akafa muna 1994) uyo anonzi ndiye muvambi weNorth Korea.
Nezve amai vaKim Jong-un:
Ko Yong-hui akazvarwa musi we 26th waJune 1952 muOsaka, Japan ndiye amai vaKim Jong-un. Iye anova ave mukadzi wechitatu wemurume wake waakasangana naye muna 1972. Amai vaKim Jong-un vaive muimbi weopera uye mutambi.
Anofungidzirwa kuti akarwira Kim Jong-un kuti ave mutsivi wababa vake asati afa muna 2004. Ko Young-hee asati afa akazivikanwa sa "Amai Vanoremekedzwa" uyo ndiye munyengeri akatendeka uye akavimbika kumurume wake akapera uye mutungamiri wekare.
Nezve Kim Jong-un's Vanun'una:
Kim Jong-Nam: Iye anova ndiye mwanakomana wedangwe wababa vake uyo akazvarwa musi wa10 Chivabvu 1971 uye akafa zuva risati rasvika zuva revaalentine; 13th Kukadzi 2017. Kubva angangoita 1994 kusvika 2001, akaonekwa semugari wenhaka kuna baba vake.
Sezvambotaurwa muchinyorwa chino, Kim Jong nam anofungidzirwa kuti akaburitswa mushure mekunyadzisa hurumende muna 2001 nemuyedzo wekushanya kuTokyo Disneyland nepasipoti yenhema.
Kim akadzingwa kuNorth Korea kubvira 2003. Anozopedzisira ave kutsoropodza hutongi hwemhuri yake. Akafa aine makore makumi mana nemashanu pazuva regumi nematatu raKukadzi 45 mushure mekuurayiwa kuMalaysia.
Kim Jong-chul: Uyu ndiye mukoma wechipiri waKim Jong-un. Iye anozivikanwa kuve mukuru mukoma-munin'ina aive Kim Jong-nam akazvarwa musi wa25 Gunyana 1981. Muna 2007, Jong-Chul akagadzwa kuve mutevedzeri wemukuru wedivi rinotungamira reVashandi 'Party reNorth Korea.
Kim Yo-jong: Iye akazvarwa pazuva re26th raGunyana 1987. Kim Yo-jong ndiye hanzvadzi yekupedzisira yaKim Jong-un uye mwanasikana mudiki wemutungamiri wekupedzisira Kim Jong-il, baba vake. Akagadzwa nemunin'ina wake seMutevedzeri Wedhipatimendi rePropaganda neDhipatimendi reAgitation reVashandi 'Bato reKorea (WPK). Kim dzimwe nguva anoperekedzwa nehanzvadzi yake diki Kim Yo-jong, anonzi anobatsira mukugadzira mufananidzo wake weveruzhinji nekuronga zviitiko zveveruzhinji kwaari.
Kim Jong-un Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Kim Jong-un nyaya, hezvino zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi izvo zvaizokubatsira iwe kuti uzwisise yakazara yehupenyu hwake.
Chokwadi # 1: Her Capital kuranga:
Kuuraya varume vake:
Jang Song-thaek aive mutevedzeri wasachigaro weNational Defence Commission uye anonzi akatungamira nyika uku Kim Jong-il (baba vaKim Jong-un) airwara.
Haanzwiri tsitsi kunyangwe hama dzake dzeropa.
Akakosha mutemo wezano kuna Kim Jong-un uye wechipiri mukuraira. Jang Song-thaek akabatwa nemhosva yekupandukira mu2013 uye akaurayiwa noutsinye mukurairwa kwaKim Jong-un mushure mekutorerwa zvese zvaakatumirwa.
Chokutanga, vaviri vevatongi vake vakavimbwa vakaurayiwa - pachena, nemapurani. Mitumbi yavo yakatsvaira nevanokanda moto. Jang Song-thaek yakabva yaurayiwa munzvimbo imwe chete, uye nenzira imwecheteyo.
Kuona maitiro aanopisira zvitunha zveavo vakatarisana nechirango chake chikuru.
Chinese mamiriro enhau, zvisinei, anoti Jang Song-thaek rakabvarurwa nepakiti wembwa zana nembiri.
Kurayira Tete vake kuti ave Chepfu:
Mushure mekuuraya babamunini vake, Kim Jong-un akaraira tete vake, Kim Kyong Hui kuti aiswe muchetura nekuti akanyunyuta pakaurayiwa murume wake Jang Song-thaek. Izvi zvinoenderana nezvakataurwa neNorth Korea yakasiya.
VERENGA Xi Jinping Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Babamunini vake vakatarisana nemafungiro akafanana nemurume wavo. Asi rake raive rufu kuburikidza nehupfu.
Chokwadi # 2: Kuuraya general kwekurara paDuty:
North Korea yakambouraya mutevedzeri wake wekutanga kuratidza kusaremekedza (kurara) pamusangano waitungamirwa naye. Gurukota, General Hyon Yong Chol, aifungidzirwa kuti akaurayiwa nepfuti yekudzivirira ndege muPyongyang. Mumwe mukuru wepamusoro akaurawa pamwe chete naGeneral Hyon Yong Chol pakuuya nepfungwa yake yekuvandudza kugadzirwa kwekurima uko kunopesana nezvinodiwa naKim Jong-un.
Zvisingadaviriki !! Akauraya mukuru uyu kuti arare.
Chokwadi # 3: Alleged Assassination Kuedza:
Muna Chivabvu 2017, hurumende yeNorth Korea yakati Central Intelligence Agency (CIA) yeUnited States neSouth Korea National Intelligence Service (NIS) yakahaya munhu wekuNorth Korea anotema matanda aishanda muRussia kuuraya Kim Jong-un “Chombo chemakemikari” izvo zvese zvaive nemwaranzi uye nano-chepfu, uye mhedzisiro yacho ingadai yakanonoka nemwedzi mishoma. North Korea yakati yaizotsvaga kudzoserwa kune chero munhu akabatanidzwa mukuedza kuuraya.
Kuuraya kwakatadza paKim Jong-un, kunoita kuti anzwe akakosha.
Chokwadi # 4: Inoti kune Kurapa kwehurwere hwese:
Kim Jong-un akamboti abudirire uko pfungwa dzakakura musainzi dzakundikana. Akataura kuti akagadzira mushonga mumwe waakataura kuti unogona kudzivirira nekurapa Aids, Ebola, Sars, uye Mers.
Ane chivimbo pamusoro pekurapwa kunobudirira kwaanoti kwaakawana.
Mukuru weKorea Central News Agency akati masayendisiti akagadzira chishamiso chemishonga inonzi Kumdang-2 kubva ginseng uye zvimwe zvinosanganiswa. North Korea yakati mushonga mumwe chetewo wakarapa inouraya bird flu yakabuda muna 2006 na 2013. Tarisa uone mishonga iri pasi apa.
Tarisa uone mushonga wezvishamiso unonzi Kumdang-2.
Chokwadi # 5: Hukama hwake naDennis Rodman
Dennis Rodman akahwina mukwikwidzi weNBA akadzokorodza rekodhi kanomwe pakati pa7-1992. Izvi zvinomuita iye akanakisa kudzokorodza munhoroondo yemutambo.
Dennis Rodman aive akanaka mumutambo we basketball zvekuti akazove Kim Jong-un wekuteedzera.
Makore aya, 1992-1997 yakave iri nguva Kim Jong-un anga ari muchikoro, iri nguva yaaive akabatikana pakuona NBA. Kare ikako, Dennis Rodman aive gamba rake basketball.
Pamutungamiri akakwirira weNorth Korea, Kim akakurukura Rodman uyo akaenda nekambani yake kuenda kuNorth Korea. Vakanga vari vokutanga vekuAmerica vanozivikanwa kuti vakasangana naM Kim.
Akaita kuedza kusangana naDennis Rodman. Musiyano mukukwirira kwavo unotyisa.
Pazasi pane mukadzi wechikadzi Kim Jong-chul, hama yemutungamiri weNorth Korea, akafananidzwa nejasi raDennis Rodman. Mhuri inotonga iyi inonzi inoda basketball uye yakambotsikirira panaRodman kuti avadzidzise kuita saiye mumazuva ake.
Munun'una wake, Kim Jong-chul akavezve anofarira Dennis.
Kim akasangana chidhori chake uye akasangana naye, achigadzira hushamwari hwakasimba nevekwaDallas chaiko zvekuti naRodman akamuudza, mushure memazuva mashoma "Kim, wawana shamwari yeupenyu hwese".
Tarisa uone Kim Jong-un wekutanga official American shamwari.
Izvo hazvina kutora nguva pamberi pe a Hukama hwakadzama hwakazvarwa pakati paRodman, pamwe chakanakisa chakadzokororwa icho basketball yakambove nacho, neizvo zvirinani nhasi zviri pachena zvinopesana uye zvine nharo mutungamiriri wezvematongerwo enyika.
Chisungo chehushamwari hwavo chinosimbisa sezvo Dennis aifungidzira basa reMudzidzisi weChikwata muNorth Korea Basketball.
North Korean basketball team inomubatira semudzidzisi, pane zvinotaurwa ne Mukuru Mukuru. Rodman akashandisa hushamwari mukana wekugadzirisa kusagadzikana pakati penyika yake United States neKim yekuNorth Korea. Zvisinei, kuedza kwake kwese kwakanzi kwakakundikana. Mushoko rake…"North Korea haina kushata sekutsanangurwa kwazvinoitwa neWestern Media".
Kim's wiki knowledgebase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere Kim Jong-un
Bato rezvematongerwo enyika Party Workers 'of Korea
Zuva rekuzvarwa 8 Ndira 1982 (North Korea zvinyorwa)
(Zvinyorwa zveSouth Korea)
Baba Kim Jong-il
Amai Ko Yong-Hui
Vanun'una Kim Jong-nam (mukoma mukuru)
Kim Jong-chul (hal-mukoma)
Kim Yo-jong (hanzvadzi diki)
murume Ri Sol-ju kana Lee Seol-ju
urefu 5 ft 8 mu (1.75 m)
uremu 136 kg (300 lbs)
Inokosha kukosha $ 5 Billion
Kutenda nekuverenga Biography yaKim Jong-un uyo akatumidzwa kuti Great Achibudirira. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paKim Jong-un Biography uye Yevacheche Nyaya, vagadziri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kururamisa. Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezva Kim Jong-un.